Arivangan'ny fanampiana maha-olona - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 19. Janoary 2020
Fihetsiketsehana 2 bulldozers amin'ny fanjakana Maraokana. Ny obelisk dia somary maintso ary tsy misy ifandraisany amin'ny fahatsiarovana ny Uygur.
Na dia maro an'isa aza ny mponina Silamo mipetraka any Maroc, ny Uighurs dia tsy tohanan'i Shina. Nanangana fahatsiarovana ho an'izany izahay, izay tsikaritry ny gazety Arabo taorian'ny nitateran'ny gazety iray tany Isiraely ny endriny mitovy amin'ilay fahatsiarovana an'i Holocaust tany Berlin. BBC Arabic dia nitatitra momba ilay tetikasa. Niteraka fikomiana an-gazety iraisampirenena izany izay tsy nitolomana tany Uyghurs intsony ny tatitra fa tamin'ny fifandonan'ny Isiraely / Palestine. Nahomby ny asa tanana!
Ny tantara momba ny Famonoana Tambabe ao amin'ny Wikipedia dia tsy nanonona ny tobin'ny asa an-tery tany an'efitra izay nahafatesan'ny Jiosy. Rava ny minisiteran'ny atitany Maraokana taorian'ny nahatongavan'ny herintaona nanamboarana azy. Izahay koa dia nitondra ny lohahevitra amin'ny asa an-tery tao amin'ny tantaran'ny Maraokana tao Wikipedia mba hiadiana amin'ny fanoherana ara-tantara sy ny fanoherana ny Semitism. Na dia fametrahana ny zavakanto hatramin'ny voalohany aza izany hanondroana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nataon'i Shina mankany amin'ny Uyghurs.
Ny boomerang amin'ny zavakanto indray dia nanamboatra arc iray famoronana mba hiadiana amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra manohitra ny silamo ary milaza ny mpiasa an-tery hadino nanadino tao Wikipedia.
Mampalahelo fa tsy mahalala karazana zavakanto hetsika tahaka izao i Maraoka. Ny ekipa
Ao amin'ny tranokalan'i Maraokana, miaraka amin'ny sarin'ilay tilikambo Orthanc avy amin'ny Lord of the Rings, ny fiainana dia manasarotra ny fiainana any Maraoka. Tranon-tsakafo misy lasopy ho an'ny olona 500 avy amin'ny Aleman'i THW dia nogadraina, fasana iray ho an'ny mpiasan'ny fampandrosoana Alemanina miaraka amin'ny bulldozers ary rava ary trano fivarotana fanampiana, izay nahasoavan'ny olona mivantana, dia natsangana tamin'ny tany.
Tobin'ny asa an-tery Bou Arfa Fahatsiarovana famonoana olona tany Marôka Aprily 21st, 2020Oliver Bienkowski